Karakarao mora kokoa ny tahiry fandriam-pahalemana noho ny teo aloha
Na dia maro aza ireo tompona no manintona ny fiverenan'ny trano manofa trano kely kokoa, ny fanontaniana ny amin'ny fomba hiarovana azy ireo amin'ny halatra na fahasimbana dia mipoitra saika amin'ny resaka rehetra ataon'ny orinasam-pitantanana fananana amin'ny tompony. Ary marina izany, satria manamarika fa sarotra ny mpitsidika mpitsabo feno izay manofa trano hipetraka mandritra ny alina vitsivitsy.
Ankoatry ny fividianana fiantohana sahaza, fepetra iray hafa izay horaisin'ireo mpampiantrano maro mba hiarovana ny hofan-trano fialan-tsasatra na fananan-dry zareo misy servisy dia ny fitazonana antoka amin'ny vahiny. Na dia azo atao alohan'ny fahatongavana aza ity amin'ny alàlan'ny fomba fangatahana fandoavambola amin'ny banky, ny fitandremana azy ireo ary ny famerenana ny vola mety amin'ny fotoana mety dia mety ho tena marary andoha. Raha nanandrana nitaky tamin'ny Guarantee Host Airbnb ianao dia ho fantatrao fa tsy tafiditra ao anatin'izany ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny trano ary mety holavina ny fitakiana isan-karazany. Na dia azo tanterahina ho an'ny mpampiantrano mivantana aza ny tahirim-bola amin'ny fahatongavany, ho an'ny trano tsy voatanisa lavitra dia tsy fanombohana izany.
Ahoana no ahafahan'ny Depositan'ny Zeevou manampy?
Zeevou dia namolavola endri-javatra tsy manam-paharoa maromaro momba ny fanangonana, famerenam-bola ary famerenana ny petra-bola fiarovana. Anisan'ny an'i Zeevou Dingana fanamafisana ny famandrihana 5-dingana, ireo vahiny izay tsy anomezan'ilay fantsom-panafody na masoivoho antoka hiadiana amin'ny fahasimbana, mila mandalo a 3-D azo antoka zahao raha efa nahazoana alalana ny karatra nomen'izy ireo ny vola napetrakao ho an'ny trano tsirairay.
Zeevou dia mitazona ireo vola ireo araka ny fandaharam-potoana manokana azonao faritana ohatra ny iray andro alohan'ny hahatongavany ka hatramin'ny roa andro aorian'ny fiaingany. Ity dia miantoka fa raha tsy manome alalana mialoha ny tahiry fiarovana ny karatra fandoavam-bola dia afaka alefa hafatra mandeha ho azy ny vahiny miaraka amin'ny Rohy azo antoka 3-D mba hamenoana ny fahazoan-dàlana alohan'ny fiarovana. Amin'ny faran'ny famandrihana dia mamela mpikarakara tokantrano hanamarina ny singa ary hitatitra ny olana amin'ny alàlan'izy ireo finday fampiharana alohan'ny hamoahana ny vola. Amin'izany dia afaka mandoa vola mora foana ianao ho an'ny entana tsy hita, ny fahasimbana amin'ny trano, na ny lalàna tapaka momba ny trano, hatramin'ny fetra ny fametrahana fiarovana alohan'ny fahazoan-dàlana fa tsy mila miahiahy momba ny vola tsy misy intsony amin'ny karatry ny vahiny.
Raha toa ka miambina vola apetrakao ianao, dia ampidirina ho azy amin'ny faktiora farany izay navoaka isaky ny vahiny rehefa voamarika ho voamarika ao amin'ny rafitra. Ankoatr'izay, ankoatr'izay mpitsidika vetivety ary fanangonana vola, ny fahombiazana mialoha ny fahazoan-dàlana amin'ny fametrahana vola azo antoka dia azo apetraka ho toy ny fepetra ilaina amin'ny torolàlana amin'ny fidirana an-tsokosoko ho an'ireo vahiny. Amin'ity fomba ity dia azonao antoka fa tsy afaka miditra amin'ny tranonao ny vahiny raha tsy voasarona ianao.
Airbnb tato ho ato navela mpampiantrano hanomboka handray tahiry fiarovana mivantana avy amin'ny vahiny ivelan'ny sehatra. Vokatr'izany dia azonao atao izao ny manodina ny faranay hanodinana ny kitapom-bolan'ny fiarovana alohan'ny fahatongavany, ary alao antoka fa tsy misy vahiny afaka miditra ao amin'ny kitapom-bolanao raha tsy efa voasaronao ny lamosinao!
As mivatra Tsy mamela ny tahirimbola hitehirizana mihoatra ny 7 andro, ny ekipanay ao Zeevou dia namolavola fiasa manokana sy famerenana amin'ny laoniny auto-auto mba hikirakirana ny vola azo antoka ho an'ireo mpampiantrano mampiasa Stripe. Ny fomba fiasa dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny alohan'ny alàlana mialoha sy ny fakana alalana alohan'ny tranga iray, na izany aza, ny vola dia voampanga feno ary naverina amin'ny ampahany na feno amin'ny vahiny aorian'ny fijanonany eo ambany io safidy io arakaraka ny toe-javatra.